भो मलाई समाज सेवा गर्नु छैन। - Enepalese.com
इनेप्लिज २०७५ माघ २८ गते ५:५७ मा प्रकाशित
ध्रुव थापा , क्यालिफोर्निया अमेरिका।
झन् अहिले त कुनै आधारभूत तालीम बिनानै रोमन र नेपालीमा लेख्न सक्ने सुबिधाको बिकाश भएको छ र अब कसैले कसैलाई गुहार्न र चाप्लुसी लाउनु पर्दैन। जे मन लाग्छ सरर आफै लेख अनलाइन पत्रिकालाई पठाउ र त्यसको लिंक र इमेल र फेसबुकको भित्ता भरि टासी देउ, बस सबैलाई जानकारी भइ हाल्छ। फेरि मन मनै फतफताउन थाल्छ , सस्तो लोकप्रियता र आत्मा संतुष्टिको माध्यम बनेको छ यो सब बिदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई। सबैलाई नाम चाहिएको छ, मात्र एउटा बहाना चहिञ्छ.सहयोग र सेवाको नाममा आफ्नै प्रचार गर्न होड़बाजी नै चल्छ यहाँ। त्यस्तै केहि बहानाको नाममा बनेको समाचार हेर्न बिहाननै देखि फोन गरेर हैरान गरेको हुनु पर्छ । कस्तो जमाना आयो आफै फोनै गरी लाइक र सेर गर्न लगाउछन लाजै पचाएर।
अचानक फोनको घन्टी बज्छ , र मन नलागि नलागि फोनको स्पिकर अन गरेर हल्लो भन्छ, ए सुनिलजी होइन म म बोलेको क्या हजुरको अति हितैसी साथि , यहालाई भेटेर केहि सल्लाह गर्नु थियो के भेट्न सकिन्छ ? उ अचानक चर्को स्वरमा बोल्छ भन्नुहोस के कामको लागि भेट्ने ? फोनमै कुरा गर्दा हुदैन ? सायद भोको पेटमा बियरको नशा र बिहानको घटनाले उसको पारा चढ़ि सकेको हुनु पर्छ।